Ukungeniswa kokucofa iipleyiti zobhedu ezigqunywe ngaphezulu ngamacwecwe obhedu
Ikhaya / izicelo / Ukukhangela ibhola / ukuhombisa amacwecwe obhedu
iindidi: izicelo, Ukukhangela ibhola, umshini wokukrazula tags: iipleyiti ezenziwe ngobhedu, ukudibanisa ubhedu, iipleyiti zethusi, copper, iipleyiti zobhedu, inductino iipleyiti zobhedu ezihlanganisiweyo, ukufakwa kwamacwecwe obhedu okutshiswa, ukujoyina iiplate zebhedu, umatshini we-inducton okhangela kwiipleyiti zethusi, RF iipleyiti zethusi induction
Injongo yovavanyo lwesicelo kukubrawuza ubhedu kunye neeplati zeebheyisi ezihlanganisiweyo ngokudibeneyo kunye nokumiswa ukuze kufakwe indawo yetotshi. Amalungu e-Overylay anokuba lubhedu kubhedu okanye kubhedu ukuya kubhedu.
Inkqubo yangoku yetotshi ineziphumo zokungcoliseka okugqithisileyo kwindibano kwaye ifuna ukuphinda ibuyele emva kokusebenza kokutsha.
DW-HF-25kw umatshini wokufudumeza
• Isiphatho sobhedu kunye nobhedu
• I-alaze alloy - I-EZ Flo 45
Iiparamitha eziphambili - Iiplate zeCopper
Amandla: 15 kW
Ubushushu kwiThemesti: Malunga ne-1350 ° F (732 ° C)
Ixesha: Ixesha eliphakathi - imizuzu emi-2
Inkqubo kunye neziPhumo:
I-EZ Flo 45 yocingo lwentsimbi lwasikwa kubude obuyi-2 ”(50.8mm) kwaye labekwa kwindawo yojongano.
Iingqungquthela zamiselwa (jonga iifoto) kwaye shushu nazo lokutshisa ixesha eliphakathi kwemizuzu emi-2 yokuhamba kwe-alloy kunye nokufezekisa ukukhanya.
Iiparamitha eziphambili -Copper Brass coupon plates
Ubushushu kwi temp: Malunga ne 1350 ° F (732 ° C)
Iingqungquthela zamiselwa (jonga iifoto) kwaye zazifudumeza kangangemizuzu emi-2 yokuhamba kwealloy kunye nokufezekisa ukukhangela ibhondi.